July 2018 | Save A tareenka
Talooyin fuushaan Iyadoo Kids On Tareen A
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Qoysaska kids, Fuushan la kids on tareen noqon kartaa hab xiiso leh oo la awoodi karo labadaba ah in ay u safraan. Waxa kale oo laga yaabaa in ugu raaxo leh oo ugu yaraan walaac marka aad la dhoofayso carruurta. Waxaan ognahay Tegay kids waxaa arrinta ma dhib waxa…
Tilmaamaha Tareenka Safarka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Europe waa qaarad cajiib ah si ay u sahamiyaan! Iyada oo waxyaabo badan oo si aad u aragto, sameeyo oo la ogaado, waa meel ku fiican in la qorsheeyo aan dhammaadka lahayn, Europe mara tareen. Maqaalkani waxa la qoray si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Save A tareenka, Tareenka ugu jaban…
4 Essentials tareen Travel Pre-Trip In Europe
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Mid ka mid ah waxyaabaha ugu farxada badan oo ku saabsan safarka ee Europe waa in aad halkaas ka heli kartaa tareen meel kasta. Waa celceliska ugu baahsan ee gaadiidka iyo jecel yahay dad badan ayaa ay u safraan qaarada. Dadka ku waydiino dhawr su'aalood ka hor inta aysan go'aansan inay qaataan…
Tareen Safar Talyaani, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
Sidee Travel Student By tareenka In Europe
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Ardayga Travel By tareenka ee Europe ma noqon karo oo keliya xiiso leh, laakiin waxbarashada iyo kobcin, sidoo kale. Xitaa more muhiim ah in arday badan (iyo waalidka) dhif qabaa waa wax ku ool ah oo dhan, ardayda xirfadaha maamulka nolosha u baahan tahay si ay u bartaan si ay u noqdaan kuwo madax bannaan oo, is-tilmaanka, masuul ka,…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Haddii tani ay tahay markii ugu horeysay ee aad safar tareen, aan shaki ku jirin ay jiraan waxa ay noqon doonaa ugu horeeyay ee badan. Daacadii, ku alla kii uu siiyey safraya tareen fursad u tageen wada waalan badan waxaa ka mid ah! maxaad? Sababtoo ah waa heer sare! Lid ku ah raacid diyaarad ahayn, tours baska raaxo…
10 Talooyin Sida Loogu Safro Shiinaha Tareen